कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा पहिलोपटक बिदेशी नागरिकको मृत्यु, कुन देशका हुन् उनी ? — Sanchar Kendra
कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा पहिलोपटक बिदेशी नागरिकको मृत्यु, कुन देशका हुन् उनी ?
काठमाडौँ । कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा पहिलोपटक बिदेशी नागरिकको मृत्यु भएको छ । काठमाडौंको टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत् एक चिनियाँ नागरिकको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो ।
हाल पोखरामा बस्दै आएकी ती महिलाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि प्रभू एयरको हेलिकप्टरमा शुक्रबार काठमाडौं ल्याइएको थियो । काठमाडौं ल्याइएसँगै धापासीस्थित ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना भएकी उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि टिचिङ रिफर गरिएको थियो ।
त्यही उनको उपचारको क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ । अस्पतालका अनुसार ५८ वर्षीया चिनियाँ महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो । मृतक महिलालाई ग्रान्डी अस्पतालबाट टिचिङमा ‘रिफर’ गरिएको थियो।
ग्रान्डी अस्पतालमै हुँदा उनमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अहिले उनको शव अस्पतालमै राखिएको र दूतावासको रोहबरमा सेनाले शव व्यवस्थापन गर्ने अस्पतालले जनाएको छ। मृतक महिलाबारे थप विवरण लिने काम भइरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो।
यस्तै सरकारले लकडाउन समाप्तीको घोषणा गरेको २४ घण्टा नबित्दै विदेसीसहित थप १ जना कोरोना सक्रमितको मृत्यु भएको छ । महोत्तरी गाउँपालिका–३ मोरइका ६० वर्षीय एक पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको हो। यस संगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या ४१ पुगेको छ ।
उता बारा र पर्सामा थप ९ जनामा कोरोना भाइरस -कोभिड-१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र आफ्नै खर्चमा पीसीआर परीक्षण गराएका ९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको नारायणी अस्पतालको पीसीआर ल्याबले जनाएको छ । सोमबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनीहरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
उनीहरुलाई नारायाणी अस्पताल मातहत रहेको गण्डक कोभिड अस्पतालमा ल्याउने क्रम जारी रहेको छ । यसअघि गण्डक कोभिड अस्पतालमा २० जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।